Myanmar actress May Zone prisioned for nine years and four months - All Things Myanmar Burmese
Previous: « “The Face of Buddhist Terror” @ TIME Magazine Cover
Next: ရတနာနတ်မယ်နှင့် ခဏတာ »
Myanmar Blog » Articles, Myanmar/Burmese » Myanmar actress May Zone prisioned for nine years and four months
ပူပူနွေးနွေးအကယ်ဒမီဆုရှင် သတို.သားနောင်နောင် ရဲ.မင်္ဂလာပွဲ
၁၈-၂-၂၀၁၃ ခု မနက် အိုရီယမ်တယ်ဟောက်စ်(မန္တလေး)မှာကျင်းပခဲ့တဲ့ ပူပူနွေးနွေးအကယ်ဒမီဆုရှင် သတို.သားနောင်နောင်နှင့်ဇနီး တို.ရဲ.မင်္ဂလာဆောင် credit to : Myawady News
Cheng Zhi En (Gao Yuan Yuan) comes from mainland China and works
Soe Myat Thuzar – what if she was thin?
Ever wonder howacelebrity would look like if she was thinner?
Mr & Ms Sony Videogenic
Mr & Ms Sony Photogenic was held at Capital Hypermarket in Thar-kay-tha,
မေဇွန်သည် ကျောင်းကိစ္စ အရေးကြီးသဖြင့် ခရီးထွက်စဉ် သော့မှာ ၎င်းနှင့်အတူ ပါသွားပြီး ယင်းသော့ကို မနုနုလွင်အား ပြန်လည်ပေးအပ်ခြင်း မရှိသဖြင့် အခန်းထဲတွင် သော့ခတ်ခံထားရကြောင်း ထင်ရှားခဲ့ပြီး…
အဆိုပါ ပြစ်ဒဏ်အပေါ် တရားခံ၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးအောင်မြင့်က ”ဒီပြစ်ဒဏ်က ပြင်းထန်တယ်လို့ ထင်မိပါတယ်။ နောက်ပြီး မေဇွန်က ကျောင်းတက်နေဆဲ ကျောင်းသူဖြစ်ပြီး ငယ်ရွယ်တဲ့သူ ဖြစ်တာရယ်၊ အရင်က ပြစ်မှုကျူးလွန်ခြင်း မရှိခဲ့ဖူးတာရယ်ကြောင့် ဒီပြစ်ဒဏ်အပေါ် သက်ညှာပေးဖို့ အယူခံ တက်သွားမှာပါ” ဟု ဇွန် ၂၀ ရက်နေ့ ညနေ ၆ နာရီ ၁၅ မိနစ်က The Daily Eleven သတင်းစာသို့ ပြောကြားခဲ့သည်။
credit to : news-eleven
Yangon PM vs Eleven Media Group
New service for Myanmar Community
RIP Sayama ET
MTV EXIT LIVE IN MYANAMR